Ururka dhalin-yarada Puntland oo soo dhaweeyay hadalkii madaxweynaha Puntland ee ku aadanayn doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya. – Radio Daljir
Seteembar 9, 2012 5:59 b 0
Gaalkacyo, Sep 09- Gudoomiyaha Ururka dhalin-yarada Puntland oo manta shir-jaraa?id saxaafada gudaha? u qabtay ayaa si weyn u soo dhaweeyay hadaladii Puntland ay kaga digtay in la marin habaabiyo doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya.
C/naasir Badal Khalaf oo ku hadlayay codka dhalin-yarada Puntland ayaa tilmaamay inay si ballaaran u soo dhawaynayaan hadalka madaxweynaha Puntland uu kaga hadlay doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya ayna la qabaan ka dhalin-yaro ahaan.
C/naasir ayaa dhinaca kale baaq ugu diray xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo ay warbaahinta u mariyeen kaasoo uu ugu sheegay inay doortaan hogaan dalka ka saari kara dhibaatada uu keenay dagaalkii sokeeye ee dalka ka biloowday sanadkii 1991dii kolkii la riday madaxweynihii dawladii kacaanka Maxamed Siyaad Barre.
Dhalin-yarada Puntland ayaa si weyn u hadal haysa doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya ka dib iyo fal-celiska ay samayn doonto dawladda Puntland.